हिरो मोटरसाइकलले राख्यो नयाँ विश्व रेकर्ड, आजै नयाँ मोटरसाइकलको घोषणा हुन सक्ने
8:53 am, बिहीबार, माघ ८, २०७७
काठमाडौं । हिरो मोटोकर्पले १० करोड यूनिट मोटरसाइकल उत्पादनको नयाँ विश्व रेकर्ड बनाएको छ । कम्पनीले आज, २१ जनवरीको उत्पादनसमेत गरेर १० करोड यूनिटको आँकडा पुरा गर्ने भएको हो ।
यहि अवसर पारेर हिरोले विश्वभरका हिरो विक्री हुने देशलाई जोडर एक कार्यक्रम गर्न लागेको छ । कम्पनीले आज मध्यान्न यो विश्व रेकर्डको उद्धघोष गर्न अनलाइन मार्फत कार्यक्रम गर्न लागेको हो ।
हिरो मोटोकर्पले यो आँकडा गतवर्ष नै पुरा हुने अनुमान गरेको थियो । तर, हुन सकेको थिएन ।
‘विगत ५ वर्षमा हामीले भारतभन्दा बाहिर ४० देशमा डिलर नेटवर्क विस्तार गरेका छौं । हाम्रा उत्पादनले अलगै छाप छाड्न सफल भएका छन् । आज हामी नयाँ विश्व रेकर्ड राख्न गइरहेका छौ, यो आफैँमा ऐतिहासिक सफलता हो’, हिरो मोटाकर्पका चेयर म्यान पवन मुन्जालले भने ।
हिरोले प्रिमियम सेग्मेन्टमा नयाँ मोटरसाइकलको चाँडै सार्वजनिक गर्दैछ, यस विषयमा आजै केहि घोषणा हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । हाल हिरोसँग १५० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकल ३ मोडलका मात्र रहेको छ, जसमा एक्सट्रीम १६० आर, एक्सट्रीम २०० एस र एक्सपल्स २०० र २०० टी हुन् ।
हिरो ३०० सीसी सेग्मेन्टमा एड्भेन्च मोटरसाइकल सार्वजनिक गर्ने अनुमान गरिएको छ । गतवर्ष देखि हिरोले हार्लेसँग पनि सहकार्य सुरु गरेको छ । हिरोले भारतमा हार्लेको मोटरसाइकल निर्माणका साथै हार्लेको अपरेशनसमेतको जिम्मेवारी लिएको हो । यसले हिरोलाई प्रिमियम सेग्मेन्टमा समेत स्थापित हुन सहयोग पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
हिरोले ३७ वर्षमा यो आँकडा पार गरेको हो । सुरुवातमा हिरो होन्डाको रुपमा १९ जनवरी १९८४ मा स्थापन भएको कम्पनी सन् २०११ सम्म हिरो होन्डा नै थियो ।
२५० सीसीको मोटरसाइकलको मूल्य २३ लाख !
नयाँ जीप कम्पासको बुकिङ खुल्ला, यस्तो छ सबै ९ भेरियन्टको मूल्य
एनआईयूको नयाँ स्कुटर सार्वजनिक, यस्तो छ मूल्य
ठूलो पेट्रोल इन्जिन र प्रतिस्पर्धी मूल्यले सेग्मेन्टमै नयाँ रेकर्ड बनाउँदै मारुती सुजुकी ब्रेजा
भृकुटीमण्डपमा पुराना मोटरसाइकल साट्ने आज अन्तिम दिन
ठूलो इन्जिन तथा कम मूल्यको कारण प्रतिस्पर्धीलाई चुनौती बन्दै ‘एक्सटर्क २५०’
हिरोले नेपाल ल्यायो २ लाख ८० हजारमा एबीएस भएको नयाँ मोटरसाइकल
मोटो टायर र कस्मेटिक परिमार्जन सहित आयो टीभीएस ‘आरटीआर १६० टु भी’
बजारका दुई हटकेकः हुन्डाई क्रेटा र किया सेल्टोस मध्ये कुन किन्ने ?
अर्थमन्त्री ज्यू ! धुवाँमा पैसा उडाउने कि विद्युतको प्रयोग बढाउने
पेट्रोल इन्जिन र चारै चक्कामा डिसब्रेक सहित आउँदै नयाँ स्कार्पियो
२ लाख ३९ हजार मूल्यसहित एनआईयूको नयाँ स्कुटर भोलिबाट विक्री सुरु हुने